Guddoomiyaasha KMG labada Aqal ee baarlamaanka oo goordhaw lagu dhawaaqay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiyaasha KMG labada Aqal ee baarlamaanka oo goordhaw lagu dhawaaqay (AKHRISO)
Waxaa goordhaw lagu dhawaaqay guddoomiyaasha KMG labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoona labadaasi guddoomiye ay yihiin kuwa ugu da’da weyn xildhibaanada maanta la dhaariyay.
Xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore ayaa noqday xildhibaanka ugu da’da weyn xildhibaanada Aqalka hoose ee baarlamaanka, wuxuuna si KMG ah xilkaasi usii hayn doonnaa inta laga soo dooranayo guddoon cusub oo rasmi ah.
Dhinaca kale, xildhibaan Maxamed Xuseen Raage ayaa isna noqday ninka ugu da’da weyn xildhibaanada Aqalka sare ee baarlamaanka, isagoo xilkaasi heyn doona inta laga soo dooranayo guddoonka cusub oo rasmi ah.
Labadaasi guddoomiye ee KMG ayaa si wadajir ah u shir-guddoomin doonna labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana guddoonka cusub oo rasmiga ah ee labada Aqal soo magacaabi doonna guddiga doorashada dalka.
Ugu dambeyntii, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa ku dhawaaqay in wixii maanta ka dambeeya shir-guddoonka ay si KMG ah ula wareegayaan labada nin ee ugu da’da weyn baarlamaanka Soomaaliya, ilaa iyo intii laga soo dooranaayo guddoonka cusub oo rasmiga ah.